လီဗာပူးလျ 1-1 ဝကျဈဘရှနျးပှဲအပွီး မှတျမှတျရရ ပွောစရာအခကျြ ၇ ခကျြ – Sports A2Z
ပုံစံကောငျးကို ဆကျထိနျးထားနိုငျတဲ့ မာနေး – ဒီနပှေဲ့မှာလညျး ဆာဒီယို မာနေးတဈယောကျ လီဗာပူးလျအသငျး တဈလုံးတညျးသောဂိုးကို သှငျးယူပွီး သူ့ရဲ့ ပုံစံကောငျးကို ဆကျထိနျးထားနိုငျခဲ့သလို ဂိုးပေါကျပြောကျဆုံးမှုကို မထေ့ားနိုငျခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ပဲလစျေ့၊ ဝကျဈဘရှနျးတို့နဲ့ပှဲတှကေနေ စလိုကျတဲ့ ခွစှေမျးကောငျးကို လာမယျ့ အသငျးကွီးတှနေဲ့ တှဆေုံ့မှုတှအေထိ ထိနျးသိမျးထားနိုငျမလားပဲ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။
ပလနျကွီးကွီးနဲ့ ဆမျကွီး – Big Sam ဆမျကွီးလို့ ချေါတဲ့ ဆမျ အလာဒိုကျဈကတော့ အနျးဖီးလျကို ပှဲကွိုအစီအစဉျကောငျးကောငျးနဲ့ ရောကျလာခဲ့တာလို့ပဲ သုံးသပျရမှာပါ။ လီဗာပူးလျတို့ ခွောကျကိုကျစညျးထဲမှာ အပိုငျကနျခှငျ့ မရသလောကျ နညျးခဲ့ပွီး မာနေးရဲ့ တဈကွိမျကိုပဲ ခှငျ့ပွုခဲ့ရသလို ခေါငျးတိုကျခကျြတဈခြို့ကိုသာ ခှငျ့ပွုခဲ့ရတာပါ။ ဂိုးဧရိယာထဲမှာ ပိတျဆို့ကစားပွီး တနျပွနျတိုကျစဈကစားခဲ့တဲ့ ဝကျဈဘရှနျးတိုကျစဈမှူး ဂရနျ့သာ ဂိုးသှငျးသခြောရငျ သူကတောငျ အောငျပှဲခံဦးမှာဖွဈပါတယျ။
တကယျလိုနတောက သီယာဂို – လီဗာပူးလျရဲ့ ဒီနပှေဲ့မှာ အဓိက လိုအပျခဲ့တာ ဘောလုံးထှကျပွီး ဘောလုံးလမျးကွောငျးတှကေို ကူညီမယျ့ ကစားသမားမြိုးပါ။ ကားတဈဂြုံးဈနဲ့ ဗိုငျနယျလျဒှမျတို့ကို စိတျပကျြလကျပကျြ ကွညျ့နရေစဉျမှာ ပဲလစျေ့နဲ့ပှဲက ခွစှေမျးပွခဲ့တဲ့ ကီတာကို ဒဏျရာ အနညျးငယျကွောငျ့ ခနျြထားခဲ့ခြိနျမှာ သီယာဂိုကိုလညျး မသုံးစှဲနိုငျသေးတာကတော့ အသငျးရဲ့ ရလဒျကို ထိခိုကျစခေဲ့ပွီး ခြိမျဘာလိနျကလညျး အဖွေ တဈခု မဟုတျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ထိပျတနျးအသငျးကွီးနှဈသငျး၊ အဝေးကှငျး၊ ဆမျမီ အဂြာယီ၊ သရေ – ထိပျတနျးအသငျးကွီးနှဈသငျးဖွဈပွီး ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဆုအတှကျ ရပေနျးအစားဆုံးအသငျးနှဈသငျးကို အဝေးကှငျးတှမှော သရကေအြောငျ လုပျနိုငျခဲ့သူက ဘယျသူပါလဲ။ ဆမျမီ အဂြာယီလို့ ချေါတဲ့ ဝကျဈဘရှနျးရဲ့ နိုငျဂြီးရီးယား ခံစဈမှူးတဈယောကျပါ။ အဈတီဟတျမှာ မနျခကျြစတာစီးတီးရဲ့ နောကျခံလူ ရူဘငျ ဒီယကျဈ Own Goal သှငျးမိအောငျ စှမျးနိုငျခဲ့သလို ဒီနပှေဲ့မှာလညျး လီဗာပူးလျကို တိုငျထိပွီးမှ ဂိုးထဲ ပွနျဝငျသှားစခေဲ့တဲ့ ခေါငျးတိုကျခကျြနဲ့ ထပျလုပျပွနိုငျခဲ့ပါတယျ။
နာပွနျပွီ – အဲ့ဒီလို ခပျတိုတိုပဲ ညညျးရဦးမှာပါ။ လီဗာပူးလျရဲ့ ခံစဈကြိနျစာကတော့ ဆိုးဆိုးရှားရှား သကျရောကျနဆေဲဖွဈပွီး တဈဦးတညျးသော စီနီယာ စငျတာဘကျ မာတဈပျကတော့ ဒီနမှေ့ာ ဒဏျရာစာရငျးထဲ ပွနျပါသှားခဲ့ပွီး ယာဂနျ ကလော့ပျကို ခေါငျးကိုကျစခေဲ့ပါတယျ။ ဂြာမနျနညျးပွကွီးအနနေဲ့ သူ့ကို ဆကျကစားစခေငျြတဲ့ ပုံစံ ပွသခဲ့ပွီး မဖွဈနိုငျလို့သာ ရီးဈ ဝီလီယမျဈနဲ့ လူစားလဲခဲ့ရသလို ခပြေဂိုးပွနျပေးခဲ့ရပွီး အသညျးကှဲခဲ့ရပါတယျ။
5 – Five of the last six goals Sam Allardyce's teams have scored at Anfield in the Premier League have been scored in the final 20 minutes of play. Sting. pic.twitter.com/iywoKD5UqK
အနျဖီးလျမှာ ပှဲပွီးခါနီး ၅ ဂိုး – ဝကျဈဘရှနျးအသငျးနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျစာမကျြနှာပျေါကို ပွနျရောကျလာပွနျတဲ့ ဆမျ အလာဒိုကျဈအနနေဲ့ သူကိုငျတှယျတဲ့ အသငျးတှနေဲ့အတူ လီဗာပူးလျကို အနျးဖီးလျမှာ ၆ ဂိုး သှငျးနိုငျခဲ့ရာမှာ ပှဲပွီးခါနီးအခြိနျတှမှော သှငျးတဲ့ ၅ ဂိုး ပါဝငျခဲ့ပွီး ဒီနဂေို့းကတော့ အိမျရှငျတှအေနနေဲ့ တျောတျောလေး စိတျပကျြစရာဖွဈခဲ့ရတာပါ။
ဂိုးပေါကျတညျ့တာ နှဈကွိမျတဲ့လား – လီဗာပူးလျတို့ ဒီနမှေ့ာ ၁၇ ကွိမျ ကနျခဲ့ရမှာ ဂိုးပေါကျတညျ့တာ ၂ ကွိမျပဲ ပါခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒါတှကေတော့ မာနေးရဲ့ ဂိုးနဲ့ မိနဈ ၉၀ က ဖာမီနိုရဲ့ ခေါငျးတိုကျခကျြတှပေါ။ ဒီနပှေဲ့မှာ ကှငျးလယျက ကနျသှငျးမှုတှေ၊ ဧရိယာအစပျက ကနျသှငျးမှုတှေ၊ ခေါငျးတိုကျခကျြတှေ အားလုံးက အဖွုနျးသကျသကျပဲဖွဈခဲ့ပွီး ဒီထဲမှာ အလကျဇနျးဒါး-အာနိုးလျဒျက ဖရီးကဈနှဈလုံးနဲ့ အားပေးသှားခဲ့သေးတာ ဖွဈပါတယျ။
ပုံစံကောင်းကို ဆက်ထိန်းထားနိုင်တဲ့ မာနေး – ဒီနေ့ပွဲမှာလည်း ဆာဒီယို မာနေးတစ်ယောက် လီဗာပူးလ်အသင်း တစ်လုံးတည်းသောဂိုးကို သွင်းယူပြီး သူ့ရဲ့ ပုံစံကောင်းကို ဆက်ထိန်းထားနိုင်ခဲ့သလို ဂိုးပေါက်ပျောက်ဆုံးမှုကို မေ့ထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပဲလေ့စ်၊ ဝက်စ်ဘရွန်းတို့နဲ့ပွဲတွေကနေ စလိုက်တဲ့ ခြေစွမ်းကောင်းကို လာမယ့် အသင်းကြီးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံမှုတွေအထိ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မလားပဲ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
ပလန်ကြီးကြီးနဲ့ ဆမ်ကြီး – Big Sam ဆမ်ကြီးလို့ ခေါ်တဲ့ ဆမ် အလာဒိုက်စ်ကတော့ အန်းဖီးလ်ကို ပွဲကြိုအစီအစဉ်ကောင်းကောင်းနဲ့ ရောက်လာခဲ့တာလို့ပဲ သုံးသပ်ရမှာပါ။ လီဗာပူးလ်တို့ ခြောက်ကိုက်စည်းထဲမှာ အပိုင်ကန်ခွင့် မရသလောက် နည်းခဲ့ပြီး မာနေးရဲ့ တစ်ကြိမ်ကိုပဲ ခွင့်ပြုခဲ့ရသလို ခေါင်းတိုက်ချက်တစ်ချို့ကိုသာ ခွင့်ပြုခဲ့ရတာပါ။ ဂိုးဧရိယာထဲမှာ ပိတ်ဆို့ကစားပြီး တန်ပြန်တိုက်စစ်ကစားခဲ့တဲ့ ဝက်စ်ဘရွန်းတိုက်စစ်မှူး ဂရန့်သာ ဂိုးသွင်းသေချာရင် သူကတောင် အောင်ပွဲခံဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လိုနေတာက သီယာဂို – လီဗာပူးလ်ရဲ့ ဒီနေ့ပွဲမှာ အဓိက လိုအပ်ခဲ့တာ ဘောလုံးထွက်ပြီး ဘောလုံးလမ်းကြောင်းတွေကို ကူညီမယ့် ကစားသမားမျိုးပါ။ ကားတစ်ဂျုံးစ်နဲ့ ဗိုင်နယ်လ်ဒွမ်တို့ကို စိတ်ပျက်လက်ပျက် ကြည့်နေရစဉ်မှာ ပဲလေ့စ်နဲ့ပွဲက ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ ကီတာကို ဒဏ်ရာ အနည်းငယ်ကြောင့် ချန်ထားခဲ့ချိန်မှာ သီယာဂိုကိုလည်း မသုံးစွဲနိုင်သေးတာကတော့ အသင်းရဲ့ ရလဒ်ကို ထိခိုက်စေခဲ့ပြီး ချိမ်ဘာလိန်ကလည်း အဖြေ တစ်ခု မဟုတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိပ်တန်းအသင်းကြီးနှစ်သင်း၊ အဝေးကွင်း၊ ဆမ်မီ အဂျာယီ၊ သရေ – ထိပ်တန်းအသင်းကြီးနှစ်သင်းဖြစ်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆုအတွက် ရေပန်းအစားဆုံးအသင်းနှစ်သင်းကို အဝေးကွင်းတွေမှာ သရေကျအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့သူက ဘယ်သူပါလဲ။ ဆမ်မီ အဂျာယီလို့ ခေါ်တဲ့ ဝက်စ်ဘရွန်းရဲ့ နိုင်ဂျီးရီးယား ခံစစ်မှူးတစ်ယောက်ပါ။ အစ်တီဟတ်မှာ မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ နောက်ခံလူ ရူဘင် ဒီယက်စ် Own Goal သွင်းမိအောင် စွမ်းနိုင်ခဲ့သလို ဒီနေ့ပွဲမှာလည်း လီဗာပူးလ်ကို တိုင်ထိပြီးမှ ဂိုးထဲ ပြန်ဝင်သွားစေခဲ့တဲ့ ခေါင်းတိုက်ချက်နဲ့ ထပ်လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နာပြန်ပြီ – အဲ့ဒီလို ခပ်တိုတိုပဲ ညည်းရဦးမှာပါ။ လီဗာပူးလ်ရဲ့ ခံစစ်ကျိန်စာကတော့ ဆိုးဆိုးရွားရွား သက်ရောက်နေဆဲဖြစ်ပြီး တစ်ဦးတည်းသော စီနီယာ စင်တာဘက် မာတစ်ပ်ကတော့ ဒီနေ့မှာ ဒဏ်ရာစာရင်းထဲ ပြန်ပါသွားခဲ့ပြီး ယာဂန် ကလော့ပ်ကို ခေါင်းကိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ ဂျာမန်နည်းပြကြီးအနေနဲ့ သူ့ကို ဆက်ကစားစေချင်တဲ့ ပုံစံ ပြသခဲ့ပြီး မဖြစ်နိုင်လို့သာ ရီးစ် ဝီလီယမ်စ်နဲ့ လူစားလဲခဲ့ရသလို ချေပဂိုးပြန်ပေးခဲ့ရပြီး အသည်းကွဲခဲ့ရပါတယ်။
အန်ဖီးလ်မှာ ပွဲပြီးခါနီး ၅ ဂိုး – ဝက်စ်ဘရွန်းအသင်းနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်စာမျက်နှာပေါ်ကို ပြန်ရောက်လာပြန်တဲ့ ဆမ် အလာဒိုက်စ်အနေနဲ့ သူကိုင်တွယ်တဲ့ အသင်းတွေနဲ့အတူ လီဗာပူးလ်ကို အန်းဖီးလ်မှာ ၆ ဂိုး သွင်းနိုင်ခဲ့ရာမှာ ပွဲပြီးခါနီးအချိန်တွေမှာ သွင်းတဲ့ ၅ ဂိုး ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဒီနေ့ဂိုးကတော့ အိမ်ရှင်တွေအနေနဲ့ တော်တော်လေး စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။
ဂိုးပေါက်တည့်တာ နှစ်ကြိမ်တဲ့လား – လီဗာပူးလ်တို့ ဒီနေ့မှာ ၁၇ ကြိမ် ကန်ခဲ့ရမှာ ဂိုးပေါက်တည့်တာ ၂ ကြိမ်ပဲ ပါခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ မာနေးရဲ့ ဂိုးနဲ့ မိနစ် ၉၀ က ဖာမီနိုရဲ့ ခေါင်းတိုက်ချက်တွေပါ။ ဒီနေ့ပွဲမှာ ကွင်းလယ်က ကန်သွင်းမှုတွေ၊ ဧရိယာအစပ်က ကန်သွင်းမှုတွေ၊ ခေါင်းတိုက်ချက်တွေ အားလုံးက အဖြုန်းသက်သက်ပဲဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒီထဲမှာ အလက်ဇန်းဒါး-အာနိုးလ်ဒ်က ဖရီးကစ်နှစ်လုံးနဲ့ အားပေးသွားခဲ့သေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။